လက်ဗွေစိတ်ခံစားမှုစကင်နာ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
လက်ဗွေစိတ်ခံစားမှုစကင်နာ - Simulation
1.12.6FMS for Android
3.9 | 500,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（3.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် လက်ဗွေစိတ်ခံစားမှုစကင်နာ - Simulation
ဒီ mood scanner simulator ဟာသင့်ရဲ့လက်ချောင်းကိုစကင်ဖတ်ပြီးသင့်ရဲ့ android device ရဲ့ touch screen ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုသိနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ့်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုပါ။
၎င်းသည် mood rings များနှင့်ဆင်တူသည့် mood sensor တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပျော်ရွှင်နေ၊ ဝမ်းနည်း၊ ဒေါသ၊ ဤရွေ့ကားဤ application သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ခံစားမှုများထဲမှအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည် ...
သင့်လက်ချောင်းကိုစကင်နာအာရုံခံကိရိယာပေါ်တွင်သာထားပါ၊ သင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုရှာဖွေစက်ကိုသင်၏ခံစားချက်ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားပါ။ !!
ကွဲပြားခြားနားသော emojis ၇၅ ခုနှင့်ခံစားချက်တစ်ခုစီအတွက်ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြင့်ယခုသင်သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများမည်သို့ခံစားရသည်ကိုသင်အမြဲတမ်းသိလာလိမ့်မည်။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်သင်၏စိတ်အခြေအနေရလဒ်ကိုပြရန် show result button ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းနှင့်မိသားစုဝင်များ၏ခံစားချက်များကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်သူတို့၏ခံစားချက်များကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ဤ detector ကိုအသုံးပြုပါ။
ဤကောင်းမွန်သော application နှင့်အကောင်းဆုံးလွတ်လပ်သောစိတ်ဓါတ်များစကင်နာရှာဖွေစက်ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏လက်ဗွေစကင်နာ Simulator ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်စိတ်ခံစားချက်များကိုပြောပြနိုင်မည်နည်းဟုသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုလှည့်စားပါ။ မည်မျှသင် prank နိုင်မည်နည်း။
ဤလျှောက်လွှာ၏အင်္ဂါရပ်များသည်စိတ်ခံစားချက် ၈၈ မျိုးနှင့်တစ်ခုစီစီ၏ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြချက်များ၊ သင့်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုစီအတွက် ၇၅ ခုလျောက်ပတ်သောအိုင်ကွန်များ (emoticons / emojis) တို့ပါဝင်သည်။ ဒီစိတ်ခံစားမှုစကင်နာ prank တွင်အရည်အသွေးမြင့်သောဂရပ်ဖစ်များနှင့်လန်းဆန်းပြီးရိုးရှင်းသော UI ရှိပြီးလက်တွေ့ကျကျလက်ဗွေစကင်နာ animation များပါရှိသည်။ ဤ app သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးအသက်အရွယ်တိုင်းအတွက်ပျော်စရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာအရွယ်အစားကိုသေးငယ်စွာထားရှိပြီး၎င်းသည်သင်၏စက်ပေါ်တွင်နေရာသိပ်မယူရ၊ SD ကဒ်တွင်လည်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးဘာသာစကား ၆၀ ကျော်ဖြင့် download ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်ဤစိတ်ခံစားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏အခြားအခမဲ့အက်ပ်များကို Google Play စတိုး၌ကြည့်ရှုပါ။
ဒီစိတ်ခံစားမှုစကင်နာ Simulator ကိုပြောင်မြောက် app ကိုပျော်စရာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။ ဒါကဟာသလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အမှန်တကယ်ဘယ်လိုခံစားနေလဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Polysoft စတူဒီယိုများသည်မူရင်းကုဒ်၊ နောက်ခံ၊ ဖန်သားပြင်၊ ပုံများ၊ အိုင်ကွန်များ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းကုဒ်ကိုပျက်စီးခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်အချက်အလက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်များမှတစ်ဆင့်မသုံးပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်အားမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအတွက်ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ DMCA တောင်းဆိုချက်ကိုတင်သွင်းမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အကောင့်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
© 2017 - 2021 Polysoft Studios
ဘာအသစ်လဲ လက်ဗွေစိတ်ခံစားမှုစကင်နာ - Simulation 1.12.6FMS
အချို့သောထုတ်ကုန်များအတွက် Layouts ကို update လုပ်တယ်
But How DO Soft Body Simulations Work?
3D simulation - Soft and supersoft softbody simulations
SOFTBODY SIMULATION / ANIMATION V10
minecraft - best of my softbody simulations
SOFTBODY SIMULATION / ANIMATION Playground V29
Fingerprint Mood Scanner Prank 1.12.4FMS
Fingerprint Mood Scanner Prank 1.12.2FMS
Fingerprint Mood Scanner Prank 1.11.9FMS